Waamichaa fi Qajeelfama itti fufa Hiriira deeggarsaa MCBO fi Fincilaa Lammiilee | QEERROO
Posted on February 23, 2021 by Qeerroo
4. Waajjiraalee fi caasaa boordii filannoo dharaa ni gubamu, meeshaaleen boordii filannoo waajjiraalee keessaa ni saamama. Filannoon fakkeessaa Oromiyaa keessa hin jiraatu.
6. Waraqaaleen dhaadannoo fi akeekkachiisaa bakkeewwan bebbeekamoo irratti ni maxxanfamu, dhaabotnii fi jaarmayaaleen Oromoo ni leellifamu. Miidiyaalee hawaasaa irrattis duulli bifa garaa garaan dhageettii addunyaa harkisuu ni hojjetama.
Bakkuma jirrutti gamtoomnee dirqama keenya haa baanu❗
Qeerroo is Power❗
Wabiin lammiilee Oromiyaa Mootummaa cehumsa Biyyoolessa Oromiyaati❗